Bacda jumlada ah ee jumlada, japan iyo Korean style boorsada haweenka, jumlada haweenka, boorsada iskuxirka, soosaarayaasha bacda qurxinta iyo alaabada - Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd
Na soo wac +86-13580997100
Noogu soo dir Emailka Sales@handbagcn.com
Bacda garabka maqaarka
Bacda garabka weelka
Bacda garabka Nylon
Bacda farriinta maqaarka
Bacda farriinta Nylon
Bacda wax lagu kala iibsado
Bacda baaldiga lagu dhejiyay
Bacda qalabka maqaarka
Kaydso bacda la isku qurxiyo
Bacda Garabka Woolen
Dongguan Yihua Shandada Co., Ltd.
Shirkaddayada ayaa ka diiwaangashan Dongguan Tianqin Baako Products Co., Ltd. sanadkii 2010, oo inta badan soo saarta dhammaan noocyada wax soo saarka baakadaha; sannadka 2020, waxaan horumarin doonnaa ganacsiga boorsada gacmeedka waxaanna dhisi doonnaa Dongguan Yihua Handbag Co., Ltd. si ay u soo saaraan alaabo kala duwan oo tolid ah; waa loo habeyn karaa iyadoo loo raacayo shuruudaha Caddaynta iyo soo saarista boorsooyinka gacanta ee kala duwan, bacaha la isku qurxiyo, boorsooyinka qalabka, boorsooyinka garbaha ee ragga iyo dumarka, boorsooyinka firaaqada, iwm; tayo sare leh, wax soo saarka waxaa inta badan loo dhoofiyaa Europe, America, Japan, Korea iyo meelaha kale.Waxaa warshad ku taala caasimada wax soo saarka adduunka-Dongguan. Warshadu waxay leedahay dhamaan noocyada qalabka wax soo saarka. Waxay bixisaa adeeg hal-joog ah laga bilaabo naqshadeynta muunadda hore iyo caddaynta illaa muddada-iibsiga iyo soo-saarista illaa shixnadda alaabada ee dhammaatay.
Bacda safarka ee garabka ah
Bacda wax lagu iibsado
Qalabka timo jarista
Bacda qurxinta afka
Bacda garabka laga tolay
Talooyinka dayactirka bacda ee aadan aqoon2021/04/30
Waxaa la sheegaa in boorsooyinka ay yihiin gacaliyaha labaad ee haweeneyda, haddaba sidee loola dhaqmaa "gacaliye"? Ka dib iibsiga boorso, gaar ahaan boorsooyinka qaaliga ah ee lagu iibsado qiimo sare, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado farsamooyinka dayactirka saxda ah. Haddii aynaan sifiican ul......
Inqilaab yar ayaa ku baraya inaad keydiso bacaha si aad u keydiso booska2021/04/30
Sida loo keydiyo boorsooyinka ayaa had iyo jeer madax xanuun ku ah haweenka, maxaa yeelay boorsooyinka ayaa ka duwan dharka oo lama laabi karo, marka waxaa loo baahan yahay meel ku filan oo lagu keydiyo boorsooyinka. Laakiin haweeney walbaa maheysan karto labis weyn oo ku habboon keydinta bacaha. Ma......
Sirta boorsooyinka qurxinta gabdhaha2021/04/30
Gabdho badan oo jecel daryeelka maqaarka iyo labbiska ayaa leh xulasho adag markasta oo ay u safraan meel fog. Waxay rabaan inay keensadaan noocyada kala duwan ee dhalooyinka iyo gasacadaha, mana sugi karaan inay la soo baxaan boorsada yar ee dugsiga.
Sidee haweenku u doortaan bacaha?2021/04/30
Rag baa fiirinaya saacadda, haweenku bacda eeg! Boorsada ayaa noqotay shay loo baahan yahay in leysku xidho MM kasta, sidoo kalena waxay astaan ​​u tahay aqoonsiga iyo dhadhanka Dadku waxay leeyihiin kumanaan wajiyo, waxaana jira kumanaan nooc oo baakado ah. Dareemaha, qaababka, iyo midabbada ayaa d......
Ma nagala tashan kartaa wixii su'aalo ah. Qiimaheena iyo adeegeena hubaal waa ku qancin doonaan.
Lambarka 179, Huancheng Street, Shimei Youyi Road, Degmada Wanjiang, Magaalada Dongguan